Horror – Alpha Premium
Satu Suro (2019) ##unicode ထိတျလနျ့သညျးဖိုသရဲကားတှကွေိုကျတဲ့ပရိသတျကွီးတှအေတှကျ အငျဒိုနီးရှား သရဲကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာကလေးကတော့ဘာယူဟာစာရေးဆရာတဈယောကျအဖွဈအသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုနပေမေယျ့ မီးဖှားခါနီးဇနီးဖွဈသူဒငျဒါကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျဖို့အတှကျတော့အသုံးစာရိတျကမလောကျငှတဲ့အနအေထားဖွဈနပေါတယျ ဒီလိုနဲ့တဈရကျမှာတော့ဦးလေးဖွဈသူရဲ့ကမျးလှမျးမှုကွောငျ့ စာလညျးကောငျးကောငျးရေးနိုငျမယျ့နရောဇနီးဖွဈသူ ကိုယျဝနျသညျဒငျဒါလညျးအပနျးဖွအေနားယူနိုငျမယျ့နရောတဈခုကိုပွောငျးရှပွေီ့းနထေိုငျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ ဒငျဒါမီးဖှားတော့မယျ့ညမှာယောကျြားဖွဈသူဘာယူဟာအိမျနားကအနီးအနားဆေးရုံတဈခုကိုတငျလိုကျပါတယျ ဒါပမေယျ့ဘာယူပွနျရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ဒငျဒါကိုတငျခဲ့တဲ့ဆေးရုံကွီးဟာဆေးရုံအပကျြကွီးဖွဈနပွေီး ဘယျသူမှလညျးမတှရေ့တော့ပါဘူး ဘာယူတဈယောကျသူ့မိနျးမဖွဈသူကို ရှာတှအေ့ောငျဘယျလိုကွိုးစားသှားမလဲ ဒီလိုခွောကျခွားဖှယျကောငျးပွီးထူးဆနျးတဲ့ဖွဈရပျတှရေဲ့နောကျကှယျမှာဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြတှေ ရှိနဦေးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ထိတ်လန့်သည်းဖိုသရဲကားတွေကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် အင်ဒိုနီးရှား သရဲကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကလေးကတော့ဘာယူဟာစာရေးဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေပေမယ့် မီးဖွားခါနီးဇနီးဖြစ်သူဒင်ဒါကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့အသုံးစာရိတ်ကမလောက်ငှတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ် ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်မှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် စာလည်းကောင်းကောင်းရေးနိုင်မယ့်နေရာဇနီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်သည်ဒင်ဒါလည်းအပန်းဖြေအနားယူနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒင်ဒါမီးဖွားတော့မယ့်ညမှာယောက်ျားဖြစ်သူဘာယူဟာအိမ်နားကအနီးအနားဆေးရုံတစ်ခုကိုတင်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဘာယူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒင်ဒါကိုတင်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံကြီးဟာဆေးရုံအပျက်ကြီးဖြစ်နေပြီး ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူး ဘာယူတစ်ယောက်သူ့မိန်းမဖြစ်သူကို ရှာတွေ့အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲ ဒီလိုခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းပြီးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow =============================================================================================== GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtotဒေါငျးနညျး (uc browser ကိုသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ) Mega.nz Link ဒေါငျးနညျး Gdrive Linkဒေါငျးနညျး
Hunting Souls (2022) ##unicode သညျးထိတျရငျဖို ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့မွငျတှရေ့မယျ့ Hunting Souls ဇာတျကားကတော့ မကောငျးဆိုးဝါးစှဲကပျလို့ ကလေးတှနောမကနျြးဖွဈရတဲ့အကွောငျးကိုအခွခေံရိုကျကူးထားတာပဲဖွဈပါတယျ ကလေးတှနေမေကောငျးဖွဈပါမြားတာ၊ ညဘကျမအိပျဘဲထငိုနရေငျ အပစှဲကပျတာလို့ယုံကွညျကွတဲ့ အယူတှရှေိပါတယျ ဒီဇာတျကားမှာတော့ ဆိုဖီဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဟာ ညဘကျတှဆေို အိပျလို့မရဘဲ သနျးခေါငျကရြငျ သူ့အဖကေိုထထချေါတတျပါတယျ ဆိုဖီလေးဟာ ခန်ဓာကိုယျလညျးအားနညျးလာပွီး ခဏခဏလညျးဆေးရုံတတျနရေသူပါ ဒါပမေယျ့ ရောဂါရငျးမွဈမရှိဘဲ ဆိုဖီ ဘာလို့ဒီလိုဖွဈနရေလဲ ဆရာဝနျတှကေလညျး အဖွမေဖျောနိုငျပါဘူး တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဆိုဖီအဖကေ အိပျမကျတဈခုကို စှဲမကျနခေဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့ သူတို့အိမျထဲမှာ သရဲဝိညာဉျလို မကောငျးဆိုးဝါးရှိနသေလို ထူးဆနျးတဲ့အရာတှဖွေဈလာတဲ့ အခါမှာတော့ နာမကနျြးဖွဈနတေဲ့ သမီးလေး ဆိုဖီရဲ့အသကျကိုကယျတငျဖို့ သူ့မိဘနှဈယောကျ ဘယျလိုကြျောဖွတျရမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာ ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် Hunting Souls ဇာတ်ကားကတော့ မကောင်းဆိုးဝါးစွဲကပ်လို့ ကလေးတွေနာမကျန်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်ပါများတာ၊ ညဘက်မအိပ်ဘဲထငိုနေရင် အပစွဲကပ်တာလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ အယူတွေရှိပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ဆိုဖီဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဟာ ညဘက်တွေဆို အိပ်လို့မရဘဲ သန်းခေါင်ကျရင် သူ့အဖေကိုထထခေါ်တတ်ပါတယ် ဆိုဖီလေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်လည်းအားနည်းလာပြီး ခဏခဏလည်းဆေးရုံတတ်နေရသူပါ ဒါပေမယ့် ရောဂါရင်းမြစ်မရှိဘဲ ဆိုဖီ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရလဲ ဆရာဝန်တွေကလည်း အဖြေမဖော်နိုင်ပါဘူး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဆိုဖီအဖေက အိပ်မက်တစ်ခုကို စွဲမက်နေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့အိမ်ထဲမှာ သရဲဝိညာဉ်လို မကောင်းဆိုးဝါးရှိနေသလို ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ ...
The Red Ghost (2020) (App member only) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ ရှရှား war horror thrillerဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ ဇာတျကားနာမညျ The red ghostဆိုတဲ့အတိုငျး ရှရှားနဲ့ဂြာမနီတှစေဈဖွဈတဲ့ကာလမှာ တစ်ဆနေီဆိုတဲ့တဈကိုယျတျောစနိုကျပါသမားတဈယောကျအကွောငျးကို ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှသှေ့ားရမှာပါ ဂြာမနီစဈသားတဈယောကျ သတိမမူဘဲ သူ့တပျဖှဲ့ထဲကခဏလူစုကှဲပွီဆိုတာနဲ့ တစ်ဆနေီက ခြောငျးမွောငျးသတျဖွတျပွီး ခကျြခငျြးပြောကျကှယျသှားတတျပါတယျ တစ်ဆနေီရဲ့နာမညျကြျောကွားမှုနဲ့ သူသတျခဲ့တဲ့ ဂြာမနီစဈသားအရအေတှကျမြားလာတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုဖမျးဖို့ ဂြာမနီတပျစိတျတဈစိတျကတာဝနျပေးခွငျးခံရပါတယျ အဲဒီနယျမွမှောသှားလာနတေဲ့ ရှရှားစဈသားအဖှဲ့တဈဖှဲ့ကလညျး သူတို့ဘကျကလူဖွဈတဲ့ တစ်ဆနေီဘယျသူလဲသိခငျြနပွေီး တစ်ဆနေီကိုရှာဖို့လာတဲ့ ဂြာမနီတပျစိတျနဲ့တိုးတဲ့အခါမှာတော့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာစောငျ့မြှျောကွညျ့ရူရမှာပဲဖွဈလို့အားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ ရှရှား war horror thrillerဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကားနာမည် The red ghostဆိုတဲ့အတိုင်း ရှရှားနဲ့ဂျာမနီတွေစစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာ တစ္ဆေနီဆိုတဲ့တစ်ကိုယ်တော်စနိုက်ပါသမားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့သွားရမှာပါ ဂျာမနီစစ်သားတစ်ယောက် သတိမမူဘဲ သူ့တပ်ဖွဲ့ထဲကခဏလူစုကွဲပြီဆိုတာနဲ့ တစ္ဆေနီက ချောင်းမြောင်းသတ်ဖြတ်ပြီး ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ် တစ္ဆေနီရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ သူသတ်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီစစ်သားအရေအတွက်များလာတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုဖမ်းဖို့ ဂျာမနီတပ်စိတ်တစ်စိတ်ကတာဝန်ပေးခြင်းခံရပါတယ် အဲဒီနယ်မြေမှာသွားလာနေတဲ့ ရှရှားစစ်သားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်း သူတို့ဘက်ကလူဖြစ်တဲ့ တစ္ဆေနီဘယ်သူလဲသိချင်နေပြီး တစ္ဆေနီကိုရှာဖို့လာတဲ့ ဂျာမနီတပ်စိတ်နဲ့တိုးတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရူရမှာပဲဖြစ်လို့အားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Comedy, Action Subtitle : ...
IMDB: 6.4/10 810 votes
Shyam Singha Roy (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အိန်ဒိယအခဈြဇာတျကွမျးကားလေးတဈကားကိုရှေးခယျြထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ဗာဆူးဟာရုပျရှငျတှကေိုအရူးအမူးစှဲလမျးတဲ့သူဖွဈပွီးတော့ အောငျမွငျတဲ့ရုပျရှငျဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈရပျတညျခငျြတဲ့လူငယျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ဇာတျကောငျရှေးခယျြတာကအစအားလုံးကိုပွညျ့စုံအောငျစနဈတကသြခြောလုပျတတျတဲ့ဗာဆူးဖွဈပါတယျ ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတျလမျးတိုလေးကိုထုတျဝသေူတဈယောကျကသဘောကသြှားပွီးတဲ့နောကျမှာ ဗာဆူးတဈယောကျရုပျရှငျကားကွီးတဈကားအတှကျအလုပျလုပျရပါတော့တယျ ဗာဆူးတဈယောကျအားကွိုးမာနျတကျအလုပျလုပျတဲ့ရလဒျအနနေဲ့သူ့ရဲ့ရုပျရှငျကားကွီးဟာ တကယျလညျးအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့ဗာဆူးတဈယောကျရညျမှနျးထားတဲ့အောငျမွငျတဲ့ ဒါရိုကျတာမဖွဈခငျမှာပဲမထငျမှတျထားတဲ့ကိစ်စကွီးတဈခုဖွဈသှားပါတယျ အကျဈအာပုံနှိပျတိုကျဆိုတဲ့နာမညျကွီးပုံနှိပျတိုကျကနလှေနျခဲ့တဲ့နှဈ ၅၀လောကျက သူတို့ထုတျဝခေဲ့တဲ့စာအုပျတှကေိုဗာဆူးကကူးခပြွီးဇာတျညှနျးအဖွဈပွောငျးလဲထားတယျလို့စှပျစှဲပါတော့တယျ တကယျလညျးဗာဆူးရဲ့ဇာတျညှနျးတှနေဲ့ စာအုပျထဲကအကွောငျးအရာတှဟောတူညီနတေဲ့အခါမှာတော့... ဗာဆူးတဈယောကျသူကူးမခခြဲ့ဘူးဆိုတာကို ဘယျလိုသကျသပွေသှားမလဲ သူ့ရဲ့ဇာတျညှနျးတှကေရောလှနျခဲ့တဲ့နှဈ ၅၀လောကျကစာအုပျတှနေဲ့ဘယျလိုလုပျတူညီနိုငျတာလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယအချစ်ဇာတ်ကြမ်းကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာဆူးဟာရုပ်ရှင်တွေကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ချင်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်တာကအစအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်စနစ်တကျသေချာလုပ်တတ်တဲ့ဗာဆူးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတိုလေးကိုထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်ကသဘောကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗာဆူးတစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားအတွက်အလုပ်လုပ်ရပါတော့တယ် ဗာဆူးတစ်ယောက်အားကြိုးမာန်တက်အလုပ်လုပ်တဲ့ရလဒ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာ တကယ်လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဗာဆူးတစ်ယောက်ရည်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့ ဒါရိုက်တာမဖြစ်ခင်မှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ် အက်စ်အာပုံနှိပ်တိုက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပုံနှိပ်တိုက်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀လောက်က သူတို့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုဗာဆူးကကူးချပြီးဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတယ်လို့စွပ်စွဲပါတော့တယ် တကယ်လည်းဗာဆူးရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေနဲ့ စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေဟာတူညီနေတဲ့အခါမှာတော့... ဗာဆူးတစ်ယောက်သူကူးမချခဲ့ဘူးဆိုတာကို ဘယ်လိုသက်သေပြသွားမလဲ သူ့ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေကရောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀လောက်ကစာအုပ်တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တူညီနိုင်တာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 1.4GB,2.7GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Romance,Horror,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 8.3/10 3,040 votes
The Curse of La Patasola (2022) ##zawgyi ဒီတဈခေါကျမှာတော့သညျးထိတျရငျဖိုဇာတျလမျးမြိုးကိုမှအကွိုကျတှတေဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ "The Curse ofaLa Patasola" ဆိုတဲ့ Horror ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဂြိမျးဈ နအေိုမီတို့အတှဲနဲ့ ဒနျနီရယျ ဆာရာတို့အတှဲနှဈတှဲဟာ တောကွီးထဲမှာအပနျးဖွရေငျးငါးဖမျးရငျးနဲ့စခနျးခဖြို့ရောကျလာပါတယျ သူတို့ရောကျလာတဲ့နရောဟာ အရမျးကိုတောနကျတဲ့နရောဖွဈပွီးတော့လူအမြားစုလညျးသိပျပွီးမသိတဲ့နရောဖွဈတဲ့အတှကျ တောကွီးထဲမှာသူတို့လေးယောကျပဲရှိနပေါတယျ သူတို့လာတဲ့လမျးမှာလညျးတောအုပျရဲ့တာဝနျရှိသူက တောကွီးထဲမှာခရီးသှားဧညျ့သညျတှသေဆေုံးတာပြောကျဆုံးတာတှရှေိတယျလို့သတိပေးပမေယျ့ ဂရုမစိုကျဘဲခရီးကိုဆကျပွီးထှကျလာကွပါတယျ ဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောကျဟာပထမဆုံးခရီးစခနျးခတြဲ့ညမှာပဲထူးဆနျးတဲ့အသံတှဖွေဈရပျတှေ ကိုကွုံတှရေ့ပါတယျ ဘယျသူမှမရှိတဲ့တောကွီးထဲကနသေီခငျြးညဉျးသံတှကွေားရတာ လူအရိပျတှေ မွငျလိုကျရတာမြိုးတှကေိုကွုံတှလေ့ာရပါတော့တယျ သူတို့လေးယောကျကွုံတှနေ့ရေတဲ့သဘာဝလှနျဖွဈရပျတှကေဘာကွောငျ့ဖွဈမလဲ အန်တရာယျမြားတဲ့တောကွီးထဲကနဘေေးကငျးကငျးနဲ့ထှကျလာနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းမျိုးကိုမှအကြိုက်တွေ့တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် "The Curse ofaLa Patasola" ဆိုတဲ့ Horror ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျိမ်းစ် နေအိုမီတို့အတွဲနဲ့ ဒန်နီရယ် ဆာရာတို့အတွဲနှစ်တွဲဟာ တောကြီးထဲမှာအပန်းဖြေရင်းငါးဖမ်းရင်းနဲ့စခန်းချဖို့ရောက်လာပါတယ် သူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာဟာ အရမ်းကိုတောနက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့လူအများစုလည်းသိပ်ပြီးမသိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် တောကြီးထဲမှာသူတို့လေးယောက်ပဲရှိနေပါတယ် သူတို့လာတဲ့လမ်းမှာလည်းတောအုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူက တောကြီးထဲမှာခရီးသွားဧည့်သည်တွေသေဆုံးတာပျောက်ဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့သတိပေးပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘဲခရီးကိုဆက်ပြီးထွက်လာကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်ဟာပထမဆုံးခရီးစခန်းချတဲ့ညမှာပဲထူးဆန်းတဲ့အသံတွေဖြစ်ရပ်တွေ ကိုကြုံတွေ့ရပါတယ် ဘယ်သူမှမရှိတဲ့တောကြီးထဲကနေသီချင်းညဉ်းသံတွေကြားရတာ လူအရိပ်တွေ မြင်လိုက်ရတာမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့လာရပါတော့တယ် သူတို့လေးယောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲ အန္တရာယ်များတဲ့တောကြီးထဲကနေဘေးကင်းကင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 4.4/10 2k votes
Vanam (2021) (App member only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီတဈခါတငျဆကျပေးထားတဲ့ဇာတျကားကတော့ "Vanam(2021)"လို့ချေါတဲ့အိန်ဒိယဇာတျကားလေးပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့... မာဂီဟာ ပနျးပုပညာကိုလလေ့ာနတေဲ့ကြောငျးသားတဈယောကျဖွဈပွီး ဂကျြဈမငျးလို့ချေါတဲ့ကောငျမလေးကတော့ မှတျတမျးရုပျရှငျဖနျတီးသူတဈယောကျဖွဈတယျ။ ဂကျြဈမငျးဟာ ပနျးပုနဲ့ပတျသကျတဲ့မှတျတမျးတဈခုကိုရိုကျဖို့ကောလိပျကိုလာရငျး ငယျသူငယျခငျြး မာဂီနဲ့ပွနျတှခေဲ့ပါတယျ။မာဂီနဲ့ သူငယျခငျြးတှနေထေိုငျတဲ့အဆောငျခနျးဟာ ဆေးသုတျသမားတဈယောကျ သတျသခေဲ့ဖူးတဲ့အခနျးဖွဈခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ မာဂီရဲ့သူငယျခငျြးတှဟောလညျးတဈယောကျပွီးတဈယောကျ ဆနျးကွယျစှာနဲ့သဆေုံးပါတော့တယျ။အဲ့တာကွောငျ့ပဲ မာဂီနဲ့ဂကျြဈမငျးဟာ နောကျကှယျက ကိစ်စရပျတှကေိုအတူတကှစုံစမျးရငျး ကောလိပျမဆောကျလုပျမီကဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အတိတျကဖွဈရပျတှကေိုသိရှိလာတဲ့အခါမှာတော့...အရှုပျအထှေးတှကေို သူတို့ဘယျလိုကွိုးစား အဖွရှောကွမလဲဆိုတာစိတျလှုပျရှားဖှယျကွညျ့ရှုရပဲဖွဈတဲ့အတှကျဒီဇာတျလမျးလေးကိုလတျမလှတျတမျးကွညျ့ရှုလိုကျကွရအောငျပါ။ ##zawgyi ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Vanam(2021)"လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့... မာဂီဟာ ပန်းပုပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂျက်စ်မင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကတော့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဂျက်စ်မင်းဟာ ပန်းပုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရိုက်ဖို့ကောလိပ်ကိုလာရင်း ငယ်သူငယ်ချင်း မာဂီနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။မာဂီနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ခန်းဟာ ဆေးသုတ်သမားတစ်ယောက် သတ်သေခဲ့ဖူးတဲ့အခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မာဂီရဲ့သူငယ်ချင်း​တွေဟာလည်းတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆန်းကြယ်စွာနဲ့သေဆုံးပါတော့တယ်။အဲ့တာကြောင့်ပဲ မာဂီနဲ့ဂျက်စ်မင်းဟာ နောက်ကွယ်က ကိစ္စရပ်တွေကိုအတူတကွစုံစမ်းရင်း ကောလိပ်မဆောက်လုပ်မီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိလာတဲ့အခါမှာတော့...အရှုပ်အထွေးတွေကို သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစား အဖြေရှာကြမလဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုလတ်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါ။ Review – KKK File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Horror,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by KKK Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 8.7/10 684 votes
Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) ##unicode မကွာသေးခငျကမှထှကျရှိထားတဲ့ action horror ကားလေးဖွဈတဲ့ "Resident Evil :Welcome to Raccoon City" ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးသဈလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ Resident Evil ကားတှရေဲ့ထုံးစံအတိုငျးရငျတလှပျလှပျနဲ့ခွောကျခွားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ကလယျရီနဲ့ခရဈတို့ဟာရကျကှနျးမွို့မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကြောငျးမှာကွီးပွငျးလာရတဲ့ မောငျနှမနှဈယောကျဖွဈပါတယျ တဈရကျမှာတော့ကလယျရီကိုမိဘမဲ့ကြောငျးကိုအုပျခြုပျတဲ့ အမျဘရယျလာကျောပိုရေးရှငျးကချေါဆောငျသှားပွီးနောကျ သူတို့မောငျနှမနှဈယောကျလညျးကှဲကှာသှားပါတယျ ဒီလိုနဲ့ငါးနှဈအကွာမှာတော့ကလယျရီတဈယောကျသူ့အဈကိုရှိတဲ့ရကျကှနျးမွို့ကိုပွနျရောကျလာပါတော့တယျ ကလယျရီတဈယောကျသူ့မွို့ကိုပွနျရောကျလာတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ရကျကှနျးမွို့မှာ ထူးဆနျးတဲ့အဆိပျတဈမြိုးပြံ့နှံ့နတေယျဆိုတဲ့လူတဈယောကျရဲ့အပွောစကားကွောငျ့ပါ ကလယျရီတဈယောကျမွို့ကိုဝငျဝငျခငျြးမှာပဲကားနဲ့တိုကျမိသှားတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျဟာမသဘေဲထလာပွီး ထှကျပွေးသှားတာကိုထူးဆနျးစှာတှလေို့ကျရပါတော့တယျ ရကျကှနျးမွို့ထဲမှာဘယျလိုကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြတှဖွေဈလာမှာလဲ ကလယျရီတဈယောကျသူ့အဈကိုနဲ့အတူရကျကှနျးမွို့ထဲကလှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ action horror ကားလေးဖြစ်တဲ့ "Resident Evil :Welcome to Raccoon City" ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Resident Evil ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ခြောက်ခြားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ကလယ်ရီနဲ့ခရစ်တို့ဟာရက်ကွန်းမြို့မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကျောင်းမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ကလယ်ရီကိုမိဘမဲ့ကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အမ်ဘရယ်လာကော်ပိုရေးရှင်းကခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းကွဲကွာသွားပါတယ် ဒီလိုနဲ့ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ကလယ်ရီတစ်ယောက်သူ့အစ်ကိုရှိတဲ့ရက်ကွန်းမြို့ကိုပြန်ရောက်လာပါတော့တယ် ကလယ်ရီတစ်ယောက်သူ့မြို့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ရက်ကွန်းမြို့မှာ ထူးဆန်းတဲ့အဆိပ်တစ်မျိုးပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြောစကားကြောင့်ပါ ကလယ်ရီတစ်ယောက်မြို့ကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲကားနဲ့တိုက်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာမသေဘဲထလာပြီး ထွက်ပြေးသွားတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ် ရက်ကွန်းမြို့ထဲမှာဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာမှာလဲ ကလယ်ရီတစ်ယောက်သူ့အစ်ကိုနဲ့အတူရက်ကွန်းမြို့ထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p Webrip,720p Webrip Genre : Action,Horror,Sci-fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 5.6/10 2,579 votes
The Guardian Aka Thiên Than Ho Menh (2021) (App member only) ##unicode အခုတငျဆကျပေးထားတဲ့ကားလေးကတော့ "Thien than ho menh"ဆိုတဲ့ဗီယကျနမျကားလေးပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့..... နာမညျကွီးအဆိုတျောမလေးတဈယောကျကိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာ ရဲတှကေ သူ့ရဲ့back-up singerဖွဈတဲ့"လီ"ကိုစုံစမျးစဈဆေးဖို့ဖွဈလာပါတယျ။ လီဟာ နာမညျကွီးအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈခငျြနသေူဖွဈပွီး အဖကေတော့ သူသီခငျြးဆိုတာလကျခံမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုတျောသဆေုံးတာနဲ့ပတျသကျပွီး လီဟာ ဘာမှမသိရှိရကွောငျးဝနျခံပွီးတဲ့နောကျမှာတော့... သူဟာလညျး အဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့အောငျမွငျမှုတှရေလာပါတော့တယျ။ ဒါပမေဲ့ လီမှာ ဖုံးကှယျထားတဲ့အရာတှရှေိနခေဲ့တဲ့အတှကျအဲ့ဒီအောငျမွငျမှုကိုထိနျးထားနိုငျပါ့မလား၊ သူ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကရောတကယျထိုကျတနျရဲ့လား၊ဖုံးကှယျထားတဲ့အကွောငျးအရာတှကေရော ဘယျလိုပျေါပေါကျသှားမလဲဆိုတာကို စိတျလှုပျရှားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာပါ။ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးကောငျးနဲ့ရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး horror, thriller type ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျလညျးလုံးဝအကွိုကျတှစေ့မေဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈပုဒျလညျး ဖွဈတဲ့အတှကျ လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရှုလိုကျကွရအောငျပါ။ ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ကားလေးကတော့ "Thien than ho menh"ဆိုတဲ့ဗီယက်နမ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့..... နာမည်ကြီးအဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ရဲတွေက သူ့ရဲ့back-up singerဖြစ်တဲ့"လီ"ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ လီဟာ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်နေသူဖြစ်ပြီး အဖေကတော့ သူသီချင်းဆိုတာလက်ခံမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုတော်သေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လီဟာ ဘာမှမသိရှိရကြောင်းဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့... သူဟာလည်း အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လီမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ပါ့မလား၊ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကရောတကယ်ထိုက်တန်ရဲ့လား၊ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက​ရော ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်သွားမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး horror, thriller type ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းလုံးဝအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါ။ Review – KKK File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Horror,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by KKK Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App ...
The Guardian Aka Thiên Than Ho Menh (2021)
Maa Oori Polimera (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ အောကျလမျးပညာနဲ့ဆကျစပျနတေဲ့ထူးဆနျးမှုတှေ လူသမှေုတှအေကွောငျးကိုမွငျတှရေ့မယျ့ သညျးထိတျရငျဖိုဇာတျကားကောငျးပဲဖွဈပါတယျ ဂနျြဂါဆိုတဲ့ရဲအရာရှိပေါကျစနတေဲ့ရှာမှာ ဆာပါ့ချြဆိုတဲ့လူမိုကျခေါငျးဆောငျနဲ့သူ့အပေါငျးအပါတှကေ အမြိုးသမီးတှကေိုနှောငျ့ယှကျစျောကားပွီးတော့ ဒုက်ခပေးနခေဲ့ပါတယျ ဂနျြဂါရဲ့အဈကိုဖွဈသူ ကိုမာရီက ဆာပါ့ချြတို့ဒုက်ခပေးတာကိုအမွဲခေါငျးခံပွီးလိုကျရှငျးပေးနတေဲ့လူကောငျးတဈယောကျပါ တဈနမှေ့ာတော့ ဆာပါ့ချြ ကားအကျစီးဒငျ့ဖွဈပွီးသသှေားခဲ့ပါတယျ အဲဒီနမှေ့ာပဲ ထူးဆနျးစှာနဲ့ ကိုမာရီပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ နောကျနေ့ လူအလောငျးနှဈလောငျးမီးရိူ့ခံထားရတာကိုတှခေဲ့ရပါတယျ အဲဒီအထဲက တဈလောငျးကတော့ ကိုမာရာဆိုတဲ့လူရဲ့အလောငျးဖွဈနပေါတယျ နောကျတဈလောငျးဘယျသူလဲဆိုတာပဟဠေိဖွဈနခေဲ့တယျ ကိုမာရာမသခေငျမှာ သူ့ဇနီးသညျ ကာဗီတာဟာ အောကျလမျးနညျးနဲ့ပွုစားခံရလို့ကိုယျဝနျပကျြကပြွီးသဆေုံးသှားခဲ့သူပါ ဂနျြပါရဲ့အဈကိုပြောကျဆုံးသှားတဲ့အမှုနဲ့ လူသမှေုတှေ အောကျလမျးပညာတှေ ဘယျလိုဆကျစပျနမေလဲ ဘယျလိုမထငျထားတဲ့လှညျ့ကှကျတှကွေုံရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတျကားမှာတော့စိတျလှုပျရှားစရာစောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈလို့ ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ။##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ အောက်လမ်းပညာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ထူးဆန်းမှုတွေ လူသေမှုတွေအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရမယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျန်ဂါဆိုတဲ့ရဲအရာရှိပေါက်စနေတဲ့ရွာမှာ ဆာပါ့ခ်ျဆိုတဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်နဲ့သူ့အပေါင်းအပါတွေက အမျိုးသမီးတွေကိုနှောင့်ယှက်စော်ကားပြီးတော့ ဒုက္ခပေးနေခဲ့ပါတယ် ဂျန်ဂါရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုမာရီက ဆာပါ့ခ်ျတို့ဒုက္ခပေးတာကိုအမြဲခေါင်းခံပြီးလိုက်ရှင်းပေးနေတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့ ဆာပါ့ခ်ျ ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးသေသွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီနေ့မှာပဲ ထူးဆန်းစွာနဲ့ ကိုမာရီပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် နောက်နေ့ လူအလောင်းနှစ်လောင်းမီးရိူ့ခံထားရတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် အဲဒီအထဲက တစ်လောင်းကတော့ ကိုမာရာဆိုတဲ့လူရဲ့အလောင်းဖြစ်နေပါတယ် နောက်တစ်လောင်းဘယ်သူလဲဆိုတာပဟေဠိဖြစ်နေခဲ့တယ် ကိုမာရာမသေခင်မှာ သူ့ဇနီးသည် ကာဗီတာဟာ အောက်လမ်းနည်းနဲ့ပြုစားခံရလို့ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့သူပါ ဂျန်ပါရဲ့အစ်ကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမှုနဲ့ လူသေမှုတွေ အောက်လမ်းပညာတွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေမလဲ ဘယ်လိုမထင်ထားတဲ့လှည့်ကွက်တွေကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Horror, Thriller Subtitle ...
IMDB: 6.5/10 4758 votes
Chhorii (2021) ##unicode အခုတဈခေါကျမှာတော့အိန်ဒိယသရဲကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးလှညျ့ကှကျတှနေဲ့စိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး တကယျလညျးကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာကတော့ ဟီမနျ့နဲ့ဆာရှီဟာအရမျးကိုခဈြကွတဲ့လငျမယားနှဈယောကျဖွဈပွီးတော့ ဆာရှီဟာလညျးကိုယျဝနျအရငျ့အမာကွီးနဲ့ဖွဈပါတယျ တဈရကျမှာတော့ဆာရှီတို့အိမျကိုလူဆိုးတှရေောကျလာပွီး ဟီမနျ့ရဲ့အကွှေးတှကေိုတဈရကျအတှငျးဆပျခိုငျးပါတယျ ပိုကျဆံရှာဖို့မလှယျကူတဲ့ဆာရှီတို့လငျမယားလညျးဘေးကငျးဖို့အတှကျရကျအနညျးငယျလောကျတခွားတဈနရောကိုရှောငျနဖေို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ ဒီလိုနဲ့သူတို့အိမျမှာအလုပျလုပျနတေဲ့ဒရိုငျဘာဦးလေးကွီးကာဂြာလာရဲ့ရှာကိုသှားဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ ဒါပမေယျ့ရှာကိုရောကျတဲ့အခါတကယျကိုလူသူပွတျလတျတဲ့နရောကွီးမှာရှိနတောဖွဈတဲ့အပွငျ တဈနတေ့ခွားဆာရှီတဈယောကျထူးဆနျးတာတှကေိုပါကွုံတှလေ့ာရတဲ့အခါမှာတော့..... အဲ့ဒီရှာကွီးရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြကဘာဖွဈမလဲ ဘယျလိုထူးဆနျးတာတှတေညျရှိနတောလဲဆိုတာကို ခွောကျခွားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ Horror ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယသရဲကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး တကယ်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကတော့ ဟီမန့်နဲ့ဆာရှီဟာအရမ်းကိုချစ်ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဆာရှီဟာလည်းကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ဆာရှီတို့အိမ်ကိုလူဆိုးတွေရောက်လာပြီး ဟီမန့်ရဲ့အကြွေးတွေကိုတစ်ရက်အတွင်းဆပ်ခိုင်းပါတယ် ပိုက်ဆံရှာဖို့မလွယ်ကူတဲ့ဆာရှီတို့လင်မယားလည်းဘေးကင်းဖို့အတွက်ရက်အနည်းငယ်လောက်တခြားတစ်နေရာကိုရှောင်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒရိုင်ဘာဦးလေးကြီးကာဂျာလာရဲ့ရွာကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါတကယ်ကိုလူသူပြတ်လတ်တဲ့နေရာကြီးမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်နေ့တခြားဆာရှီတစ်ယောက်ထူးဆန်းတာတွေကိုပါကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့..... အဲ့ဒီရွာကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်လိုထူးဆန်းတာတွေတည်ရှိနေတာလဲဆိုတာကို ခြောက်ခြားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် Horror ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow